အကောင်းဆုံး ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ထူးချွန်နည်းပညာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထွက်ကုန်များမည့်အသင်းကိုအခြေခံပြီးကျနော်တို့ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့အရည်အသွေးမြင့်မားနိုင်ကြသည် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဖောက်သည်ကျေနပ်အောင်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဓမ္မဓိဋ္ဌာန် "ဖောက်သည်-oriented, အစာရှောင်ခြင်း, အရည်အသွေးမြင့်မားဖောက်သည်န်ဆောင်မှု" ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်ထုတ်ကုန်အကျိုးစီးပွားဖြစ်သင့်, သင်မှအခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြတ်ပိုင်းပေါ်မှာပူဇော်ခြင်းငှါအလိုရှိပါလိမ့်မည်။
, သူတို့သည်တရုတ်နှင့်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင်ကောင်းစွာခံဖြစ်ကြ၏။ ငါတို့သည် သာ. သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်သင့်အားကြိုဆိုပါတယ်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်ကြည့်ရှု!
QPC-BK သည်ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော Polycarbonate ဖြစ်သည်(PC ကို)အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်အသုံးပြုရန်ပလပ်စတစ်ဗဓေလသစ်.MFI 8-30.အရောင်:အနက်ရောင်
Polycarbonate မှထုတ်ကုန်(PC ကို)ရှည်လျားသောဘဝဝါကြွားခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်.ဖန်ခွက်ထက်ပိုမိုသန်မာပြီးပေါ့ပါးသည်,Polycarbonate(PC ကို)ပြန်လည်အသုံးပြုသောပလတ်စတစ်များသည်စွမ်းအင်နှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုစုဆောင်းသည်.ထို့အပြင်,Polycarbonate(PC ကို)ပလပ်စတစ်ဗဓေလသစ်သည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အသုံးပြုစဉ်အတွင်းပျက်စီးခြင်းကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်.ပို့စ်အများစု-ထုတ်လုပ်မှုစွန့်ပစ်စနစ်ကိုပြန်လည်အသုံးပြုသည်“ပြန်လည်အသုံးပြုပလပ်စတစ်&ကဗျာ;Polycarbonate(PC ကို)ရောစပ်.
PC ကိုပလပ်စတစ်ဗဓေလသစ် applications များ
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.recycledplasticresin.com/my/pc-pellet.html
အကောင်းဆုံး ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။